नयाँ नेता खोज्न नयाँ नर्सरी खोज्नु पर्छ, रियालिटी शो होइन – गगन थापा – Life Nepali
काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले आउँदो पुस्तामा नयाँ नेताका लागि नयाँ नर्सरी खोज्नु पर्ने बताएका छन् । पोखरामा भइरहेको नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको आइतबार भएको सेसनमा उनले भातृ संगठनमात्रै होइन सामाजिक आन्दोलनको नेतृत्व लिएकाहरु पनि राजनीतिक नेतृत्व लिनसक्ने गरी प्रशिक्षण दिन आवश्यकता औंल्याए ।
कार्यक्रम सञ्चालन गरेका नयाँपत्रिकाका सम्पादक उमेश चौहानले नयाँ नेताहरु उत्पादन गर्ने भातृसंगठनको अधिवेश हुन नसकेकाले अब रियालिटी शोबाटै नयाँ नेता खोज्नु पर्ने दिन आएको हो ? भनि गरेको प्रश्नमा नेता गगनले सो जवाफ दिएका हुन् । चौहानको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘नयाँ नेता खोज्न अब नयाँ नर्सरी खोज्नुपर्छ । समय आफैंले नेता जन्माउँछ । नेता बन्न चाहनेले अवसरलाई लिनसक्नु पर्छ ।
भातृ संगठनमात्रै होइन अहिले भइरहेका सामाजिक आन्दोलनका नेतृत्व लिएका पनि भविष्यका नेता हुनसक्छन् ।’पार्टीभित्र विकल्प खोज्नु पर्ने अवस्था आए आफू पछि नहट्ने बताएका उनले संसदको प्रभाशाली प्रतिपक्ष बन्न कांग्रेस सक्षम रहेको जवाफ पनि दिए । कालापानी, लिपुलेक जोगाउनदेखि मुलुकभित्र भएका ठूल्ठूला अनियमितताविरुद्ध आवाज उठाउने उनको प्रतिबद्धता छ । मुलुकको विकास र समृद्धिमा नेताहरुको मात्रै होइन सबै क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति र जनताको पनि उत्तिकै भूमिका रहने नेता गगनको भनाइ छ ।
शिक्षासँग सम्बन्धित् उदाहरण बारम्बार पेश गरेका उनले राजनीतिक नेतृत्व वा मन्त्रीले मात्रै चाहेर केही नहुने बताए । आ–आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । हालसम्म प्राप्त उपलब्धी राजनीतिक संघर्षबाटै प्राप्त भएको भन्दै गगनले हालसम्म केही भएन भन्नु गलत भएको धारणा राखे । ‘सबैनेता र हालसम्म भएका सबै राजनीतिक गतिविधि खराब भन्ने वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भन्ने दल र तिनका नेताले देख्नु गलत हो’, गगनले भने ।
Previous यो सरकारले २२ वर्ष सम्म नभएका काम दुई वर्षमै पुरा गर्यो – मन्त्री बाँस्कोटा
Next भीम रावलको सरकारलाई प्रश्‍न ? आफ्नो जग्गा राखेर नक्सा बनाउन के ले रोक्यो?